Shir looga hadlayo dhaqaalaha dalka oo ka furmay magaalada Muqdisho. – Kismaayo24 News Agency
Shir looga hadlayo dhaqaalaha dalka oo ka furmay magaalada Muqdisho.
by admin 7th May 2019 032
Wasiirka Hawlaha Guud, Dib u dhiska & Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Aadan Hoosow ayaa shir guddoomiyey shirka kaabayaasha Dhaqaalaha Dalka oo Sadexdii biloodba mar lagu qabto magaalada muqdisho.
Shirka ayaa waxaa looga Wada hadlay intii uu socday Horumarinta Kaabayaasha Dhaqaalaha Dalka, Dhegaysiga Warbixinada Wax yaabahii Qabsoomay & Sidii loo dardar galin lahaa Dhismaha Mashaariicda kaabayaasha Dhaqaalaha Dalka ee qabyada ah.
Wasaarada Qorshaynta, Maalgashiga Iyo Horumarinta Dhaqalaha ayaa Soo bandhigtay warbixin heerka uu marayo Diyaarinta iyo Qorista QHQ9aad ee dalku uu yeelanayo 2020-2024.
Waxaa shirkan ka qeybgalay mas’uuliyiin ka kala socotay hay’adaah kaladuwan ee Dowladda Soomaaliya,sida wasiiro,agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo madaxa kale oo caalami ah kuwaasi oo qeyb ka ah shirkan sedx bilood laha ah ee inta badan looga hadlo horumarinta mashaariicda Kaabayaasha Dhaqaalaha ee dalka.
SAWIRO: Wararkii ugu dambeeya ee Shirka Wadatashiga ee Garowe oo maalinti labaad galay
Somaali Turjumaan FBI ah oo lagu xiray dalka Mareykanka.
Passport Soomaaliga oo uu aqoonsadey Dalka……………
admin 13th May 2014 28th August 2015
Xog: Senator Faroole oo kashifay faragelintii Villa Somalia ku sameysay.
DEG DEG: Dowladda soomalia oo xoog kusoo furatay Caruur yar yar oo Shabaab ay tababari jireen
admin 19th January 2018 19th January 2018